‘बाथ रोग’ के हो ? यसका लक्षण र उपचार विधी - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ सर्ने/नसर्ने रोग ∕ ‘बाथ रोग’ के हो ? यसका लक्षण र उपचार विधी
‘बाथ रोग’ के हो ? यसका लक्षण र उपचार विधी
डा. श्वेता नकर्मी बाथ रोग विशेषज्ञ नेशनल बाथ रोग सेन्टर, रातोपुल सोमबार, २०७६ कात्तिक ४ गते, १७:२६ मा प्रकाशित
कुनै एक प्रकारको मात्र नभएर विभिन्न रोगहरुको संकलनलाई बाथ रोग भनिन्छ । बाथ रोगका प्रकार १ सयभन्दा माथि र २ सयको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा धेरै रोगहरु एउटा संकलन समूह नै बाथ रोग हो । यो एउटा ‘अटोम्युन प्रोसेस’बाट हुने रोग हो ।
‘अटोम्युन प्रोसेस’ भन्नाले हाम्रो शरीरमा रोगविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमताको कोषिकाहरु हुन्छन् । र, ती कोषहरुको क्षति भएमा त्यसले आफ्नै शरीरमा हानी पु¥याउन थाल्दछ । यस्तो अवस्थामा शरीरले आफ्नो अंग र दोस्रो अंगको पहिचान गर्न सक्दैन् । जसकारण उक्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले आफ्नै शरीरलाई पनि हानी गर्ने हुन्छ । शरीरको यस्तो प्रक्रियालाई नै ‘अटोम्युन प्रोसेस’ भनिन्छ । र, यस्तै किसिमको रोगभित्र बाथ रोग पनि पर्दछ ।
व्यक्तिको शरीरमा यो के कारणले देखा पर्दछ?
यो रोग देखा पर्ने वास्तविक कारण हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर, यो समस्या देखा पर्नु पछाडिको एक कारणमध्ये जेनेटिक्स समस्या पनि एक हो । जस्तो कुनै वशांणुगत गुणको कारण यो रोग एक पिढींबाट अर्काै पिढींमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । केही व्यक्तिहरुमा वातावरणीय प्रभावका कारण पनि यो रोग देखा पर्ने हुन्छ ।
यस्तै केहीमा धुम्रपानको कारण पनि यो रोग देखा पर्ने हुन्छ । तसर्थ, यो रोग देखा पर्नुका पछाडि यही एक कारण हो भनेर हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
बाथ रोगका लक्षणहरु
बाथ रोगका १ सयभन्दा बढी प्रकारहरु रहेका छन् । त्यसैले सोही किसिममा यसका लक्षणहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । जसमध्येका बाथ रोगका केही लक्षणहरु यसप्रकार छन् ।
शरीर अरठ्ठ हुने
छालामा डाबरहरु देखा पर्ने
घाममा जाँदा गालामा रातो बिबिराहरु देखा पर्ने
मुखभित्र बारम्बार घाउ आइरहने
निको नहुने गरी बारम्बार ज्वरो आइरहने
मेरुदण्ड तथा गोडा दुख्ने
हिड्दा गोडाबाट कट्कट् आवाज आउने
माथिका लक्षणहरु बाथ रोगमा देखा पर्ने साझा समस्याको रुपमा लिइन्छ । यसबाहेक बाथको किसिमअनुसार यसको लक्षण पनि फरक फरक हुन सक्छन् ।
बाथ रोगको उपचार विधि
उपचार विधि बाथ रोगको प्रकार र यसले शरीरको कुन—कुन भागमा असर पारेको छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सोहीअनुसार नै फरक—फरक किसिमको रहेको पाइन्छ । यदि यसले शरीरको जोर्नीहरुको भागहरु मात्रै समातेको छ भने उपचार विधि सहज र सस्तो हुन जान्छ । तर, यसले शरीरको भित्री अंग समातिसकेको छ । र, प्रारम्भिक चिकित्सा पनि रोग कम हुन सकेको छैन भने उपचार अलि महंगो पर्न जान्छ ।
पहिलो कुरा बाथ रोग निको हुने रोग नै होइन । तसर्थ, यो पछि दोहोरिने भन्ने हुँदैन् । त्यसैले यसलाई हामीले शरीरमा बढी हावी हुन नदिन कन्ट्रोल गरिरहने हो । तर, कहिलेकाहिं शरीरमा यसको मात्रा बढिरहन सक्छ । बाथ रोग नियन्त्रणको उपाय त औषधिको सेवन नै हो । फिटनेस र खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैमा उत्तिकै मात्रामा लागु हुन्छ । सबैले आफ्नो शरीरको उचित केयर त गर्नुपर्छ नै । तर, बाथ रोग नियन्त्रणका लागि औषधि खानु नै पर्ने हुन्छ । औषधि बिना यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन् ।